Notsatotsatohany ny antsy ny vady aman-janany, noho ny hasarotam-piaro
Amin’ny 16 martsa ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana mahakasika an’i Yassine Mechta, raim-pianakaviana nandripaka ny vady aman-janany miisa enina, tao Rhône Frantsa.
Tamin’ny 5 desambra 2015 no nanaovany izany zava-doza izany, vokatry ny hasarota-piaro. Notsondroniny tamin’ny antsy ireo zanany 5 volana, 17 volana, 2 taona ary 6 taona, ary koa ilay renim-pianakaviana izay nitondra vohoka 1 volana. Mbola tratra tao an-tokontranony moa izy, niaraka tamin’ilay antsy feno rà teo akaikiny, tamin’ny fotoana nahatongavan’ny mpamonjy voina. Niaiky ny heloka bevava vitany rahateo izy ary mbola nampiany fanazavana koa fa tena saro-piaro be amin’ny vadiny izy, nefa nahiany mafy ho nampirafy azy ity farany. Nibaboka ihany koa anefa izy, fa mbola izy ihany koa no namono ny rahalahiny, 3 andro mialohan’ity nandripahany ny ankohonany ity. Nisy nieren-doza ihany anefa ny zanak’izy mivady, satria tany amin’ny havany ilay lahimatoa, 13 taona. Asa an-terivozona mandrapaha-faty no heverina fa sazy hiandry ity raim-pianakaviana ity.